अर्घाखाँचीका पाण्डेलाई गृहसचिवको जिम्मेवारी, प्रदेश ५ मा कृष्णहरी पुस्कर | Ekata News
एकता न्यूज / साउन २५, २०७८ - सोमवार
काठमाडौँ । सरकारले गृह सचिवमा टेक नारायण पाण्डेलाई सरुवा गरेको छ ।
सोमबार९आज० वालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव पाण्डेलाई गृह सचिवमा सरुवा गरेको हो । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा तानिएको छ ।
बैठकले वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौड्याललाई रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा पठाएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको अतिरिक्तमा रहेका सचिव किरणराज शर्माको प्रदेश नं. ३ को प्रदेश प्रमुख सचिवमा र कृष्णहरी पुस्करलाई प्रदेश नं. ५ को प्रदेश प्रमुख सचिवमा सरुवा गरिएको छ । जल तथा उर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।
आठ महिनाअघि सचिवमा बढुवा भएपछि प्रदेश २ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका प्रदेश २ का प्रमुख सचिव गोकर्णमणी दुवाडीको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा भएको छ । यस्तै ६ महिनाअघि सचिवमा बढुवा भएर प्रदेश १ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका सचिव सुमनराज अर्यालको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा भएको छ ।
भर्खरै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका सचिव किरणराज शर्मा र खगेन्द्रप्रसाद नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन छ । उनीहरु दुवै जना सचिव बढुवा भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्ततर्फ हाजिर गर्दै आएका थिए ।
तर भर्खर सचिव बढुवा भएर प्रधानमन्धी तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमाअतिरिक्तमा हाजिर गरिरहेका डा. रामप्रसाद घिमिरे र हरीप्रसाद मैनालीको भने पदस्थापना गरिएको छैन । उनीहरुले बढुवा भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्ततर्फ हाजिर गर्दै आएका छन् ।
आगामी चैत सम्म सबैलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिने सरकारको घोषणा
काठमाडौँ – सरकारले चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य नागरिकलाई...